‘मौद्रिक नीतिले मुद्रा स्फितीलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ’ ~ Banking Khabar
‘मौद्रिक नीतिले मुद्रा स्फितीलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ’
पूर्व गभर्नर, एवं अर्थविद्
केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा २ लाख नेपाली युवाहरुलाई रोजगारी दिने भनेर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १२ अर्व रुपैयाँ राखिएको छ । स्रोत र साधनहरु पनि छ तर नेपाली युवाहरुले अनुभूति गर्न सक्ने स्थितिमा भने छैनन् । अहिले उनीहरु आत्तिएर रोजीरोटीकै खोजीमा आफ्ना जहान केटाकेटी पाल्नका लागि छिमेकी मुलुक भारत जान लर्को लागेको अवस्था छ । उनीहरुलाई नेपालमै रोजगारी दिनुपर्छ ।
व्यापार घाटा चुलियो
केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट विस्तारकारी बजेटको रुपमा संज्ञा दिन थालिएको छ । गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याइएको १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेटले चालु खर्च समेत धान्न सक्ने स्थिति छैन । कर्जा लिएर बजेट ल्याएको जस्तो देखिएको छ । बजेट सञ्चालनका लागि आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै झण्डै साढे दुई खर्ब जस्तो ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ बैंकसँग रहेको रकम यदि सरकारले सापटी नलिएको भए नीजि क्षेत्रमा त्यो पैसा जान्थ्यो । उसले उत्पादन गर्न, रोजगारी वृद्धि गरेर खर्च गर्न सक्थ्यो ।
तर सरकारले नै मलाई चाहिन्छ भनेपछि दिनेनै भयो ।
यसले प्रोडक्सन र रोजगारी वृद्धि गर्न बाँधा आउन सक्छ भन्ने रह्यो । यसले मूल्य वृद्धिलाई पनि बढाउँछ । मृल्यवृद्धिको चाप आपूर्ती व्यवस्थापनमा भर पर्दछ । हाम्रो कृषि प्रदान देशले कृषिमा आधारित रहेका बस्तुहरु आयत गर्दछौं । त्यसमा मन्त्रालय पनि रमाएको छ । किनभने त्यसबाट भ्याट आउँछ ।
त्यसबाट भन्सार महसुल पनि प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण हामी हाम्रो भन्सार आयतमुखी छ भन्छौं । आयतले प्रशय पाएको छ । व्यापार घाटा चुलिएर गएको छ ।
‘बजेट स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन’
केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट देउवा सरकारले स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । हिजो केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट एउटा पार्टीले ल्याएको बजेट हो । अहिले संयुक्त सरकार छ । आफ्नो हिसावले बजेट ल्याउने अहिलेको सरकारलाई हक पनि छ । बजेट सर्वस्वीकार्य भएका विषयलाई समोवेश गरेर ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु ६, ७ वर्षमा सफल हुन सक्छ भने त्यस्ता योजनालाई बजेट र जनशक्ति राखेर अगाडि बढाउनुपर्छ
मौद्रिक नीतिमा सबैको चासो
नयाँ सरकार आएको छ । यहि बीचमा सरकारको नीति के होला ?, राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति के होला ? भनेर पर्खिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा हार्मोनियस किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्छ । यदि त्यस्तो भएन भने अर्थतन्त्रले राम्रोसँग बाटो लिन सक्दैन । यी सबै बीचमा मौद्रिक नीति के हुन्छ भन्ने अहिलेको चासोको विषय बनेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा के कुरामा ध्यान दिने ?
अब ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीति फेरि पनि विस्तारकारी हुन सक्ने स्थितिमा छ । किनभने त्यहाँ गइसकेपछि आफ्ना भोटरहरु, क्षेत्रको विषयलाई ध्यान दिने गर्दछन् । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले निजि क्षेत्रबाट प्रशंसा प्राप्त गरेको थियो । तर पनि आधा रकम समेत खर्च हुने स्थितिमा पुगेन । साना उद्यमीहरुले राहत नपाएको गुनासो पनि आयो । कोभिडबाट उद्योग धन्दामा परेको असरलाई नयाँ मौद्रीक नीतिले समेट्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र उद्योग व्यवसायीबीच ट्रान्सफोर्स बनाएर अगाडी बढ्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ । मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला एवं नीजि क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रा स्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले तारतम्मे मिलाएर अगाडी बढ्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ ।
(मिडिया इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले राख्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)